Hanti-dhawrka guud oo ka horyimid tallaabo ay qaadeen Golaha Wasiirada Rooble - Caasimada Online
Home Warar Hanti-dhawrka guud oo ka horyimid tallaabo ay qaadeen Golaha Wasiirada Rooble
Hanti-dhawrka guud oo ka horyimid tallaabo ay qaadeen Golaha Wasiirada Rooble
Muqdisho (Caasimada Online) – Xafiiska Hantidhawrka Guud ee Qaranka ayaa si rasmi ah ugu wargaliyay Ra’iisul Wasaaraha joojinta Xeer-nidaamiyaha Sharciga Maareynta Maaliyadda oo Golaha Wasiirradu ay ku ansixiyeen shirkii toddobaadlaha ee Khamiistii.
Qoraalka wargelinta ee Xafiiska Hantidhawrka uu soo saaray ayaa lagu sheegay in xeer-nidaamiyaha la ansixiyay ay jiraan khaladaad sharci iyo qodobbo kasoo horjeeda Sharciga Maareynta Maaliyadda Guud (PFM Act 2019) iyo Sharciga Xafiiska Hantidhawrka Qaranka.
“Wasaaradda Maaliyadda XFS ayaa horay si sharci-darro ah u dhaqan-galisay xeer-nidaamiyaha Maareynta Maaliyadda Guud si aan waafaqsaneyn habraacyada uu farayo Sharciga Maaraynta Maaliyadda Guud ee 2019 iyada oo aan la horgeynin Golaha Wasiirada, sidoo kalena aan lagala tashan Hay’addaha dowladda ee ay khuseyso sida ku cad warqadda uu xafiiska Hantidhawrka Guud kasoo saaray arrinkaas,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Xafiiska Hanti-dhawrka ayaa ku eedeyay Wasaaradda Maaliyadda inaysan raacin tallooyinkii uu horay u siiyay xafiiska Hanti-dhawrka oo hore ula xiriiray, islamarkaana ay ku adkeysatay inay mar labaad Golaha Wasiirada horgeysay, ayada oo Goluhuna uu ansixiyay.
“Tusaale ahaan xeer-nidaamiyahaasi waxa uu leeyahay khaladaad sharci oo Guud ahaan Xeer-nidaamiyuhu kuma qorna Luuqad sharci iyo hanaanka sharci-qorista, Xeer-nidamaayaha waxaa ku jira lambaro iska hor-imaanaya dhexdiis oo is-burinaya sida lambarka 98-aad oo ka hor-imanaya lambarka 19-aad.”
“Waxaa rajeynaynaa in wax ka qabashada arrintan mudnaan gaar ah la siiyo si loo joogteeyo, loona horumariyo hawlihii laga soo qabtay dib-u-habaynta nidaamka Maaliyada dalkeena, looga fogaado waxkasta oo sahli kara musuq iyo wax is-daba-marin iyo ku takrifal hantida Umadda.